News - ရှန်ဟိုင်း Jianzhong သည်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန် Enpak မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံသည်
ရှန်ဟိုင်း Jianzhong သည်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန် Enpak မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထောက်ခံသည်
ရှန်ဟိုင်း Jianzhong သည်အာရုံခံကိရိယာထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးပြုသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သရဖူကပ်ရောဂါအသစ်ဖြစ်သောဗောဓိသတ္တမကင်းသောစစ်ပွဲ၏ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကြီးမားသောမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Enpak အမှတ်တံဆိပ်မျက်နှာဖုံးများ၏ထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်နေ့လျှင် ၅၀၀၀၀ အထိရှိသည်။ ပြည်တွင်း ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်တင်းပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏စီးပွားရေးကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့တိုးချဲ့လာသည်။ လက်ရှိတွင်ပြည်ပသို့တင်ပို့သောမျက်နှာဖုံးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည် - တစ်ခါသုံးသန့်ရှင်းရေးမျက်နှာဖုံးများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများ။ ပို့ကုန်နိုင်ငံများတွင်ဥရောပ၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်မျက်နှာဖုံးစွပ်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံတစ်ခုလုံးရှိသည် အဆင့် ၁၀၀,၀၀၀ ရှိသောသန့်ရှင်းပြီးဖုန်မှုန့်ကင်းသည့်အလုပ်ရုံသည်မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည် ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်သည် ISO13485: 2016“ စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ဆေးပစ္စည်းကိရိယာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်” နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဓိကကျသောလုပ်ငန်းစဉ် (၆) ခုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏အားသာချက်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၁။ ပလတ်စတစ်နှာခေါင်းချွတ်ခြင်း၊ 2. မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုကောင်းမွန်စွာထားရှိပါ။ ၃။ သန့်ရှင်းသောဝါဂွမ်းမြင့်သော elastic နားပတ်များ၊ 4. Electret ကုသမှု, filtering ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, လေထုစိမ့်ဝင်ခြင်း (၅) အရေပြားနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖိုင်ဘာ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ၆ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ပြည့်စုံသောပို့ကုန်အရည်အသွေးနှင့်တည်ငြိမ်သောထောက်ပံ့မှုများရှိသည်။ ဥရောပ CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများကိုပို့ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏လူဖြူစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ မျက်နှာဖုံးအညွှန်းတိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုအေဂျင်စီ၏ထောက်ခံချက်အစီရင်ခံစာရှိသည် - EN14683 EU တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများနှင့်တွေ့ဆုံသည့် TUV တောင်ပိုင်းဂျာမန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းစင်တာမှထုတ်ပြန်သောစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ၊ PONY PUNI စမ်းသပ်မှုသည်စစ်ထုတ်ခြင်းစွမ်းအားကို ၉၉% ထုတ်ခဲ့ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိမှုလိုအပ်ချက်များသည် GB T 32610 -2016 နေ့စဉ်အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးနည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်မြဲသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ အချိန်မီဖြန့်ဝေမှုနှင့်အေ၏အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာငါတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဆင့်တိုင်းရှိခေါင်းဆောင်များ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ကူညီမှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါသည်နောက်ဆုံးတွင်ကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကာလ၌နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းနှင့်ခိုင်မာမှုသည်ကုမ္ပဏီ၏ရေရှည်ရှင်သန်မှုဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပိုမိုပြည့်စုံသောခေတ်မီစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခြင်း၊ ပြင်ပ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံခြားနည်းပညာလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးများကိုချိုးဖျက်ရန်နှင့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်များ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ထိုကြောင့် Enpak အမှတ်တံဆိပ်မျက်နှာဖုံးများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။